အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မရခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ဆောင်
31 Responses to “မရခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ဆောင်”
ပထမဆုံး comment ဟ ဟ..
မမ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်..ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီကနေ လက်ဆောင်တစ်ခုလောက် ရချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အမှတ်တရဆိုပြီး တစ်ခုမှ မရဘူးပါဘူး ..
April 23, 2010 at 10:35 PM
ချစ်သူဆီက ရတဲ့လက်ဆောင်ဟာ အဖိုးတန်ပစ္စည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး ...
မိန်းခလေးတိုင်း လိုချင်တောင်းတ စောင့်စားခဲ့ရတဲ့လက်ဆောင် ဆိုတာ
ချစ်သူ ယောက်ျားလေးတိုင်း သိမြင်နားလည်နိုင်ပါစေ....
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သစ္စာတရား အပြင် လေးနက်တဲ့ အမှတ်တရ တခုခု ရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ချစ်သာဟာ လောကမှာ တကယ်ရှားပါးတယ် ချောရယ်..။ အခုလို ချစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ဆီက အဘွားရခဲ့ အဖိုးဆီက အမှတ်တရဟာ တန်ဘိုး နည်းသည်ဖြစ်စေ များသည်ဖြစ်စေ သူမအတွက်တော့ အဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပဲပေ့ါ။
ဘာသာပြန်ရော အရေးအသားလေးပါ အရမ်းကောင်းတော့ ရင်ထဲအထိ ရောက်သွားတယ်။
ဖတ်ပြီး နင့် သွားသလို ရင်ထဲ မှာ ဖြစ်မိ ပါတယ် ။
အချစ် က ဘယ်တော့ မှ ဟောင်းနွမ်း အိုမင်းသွား တယ်မရှိ ဘူး ဆိုတာကို
ပြော ချင်တာ လို့ ထင်ပါတယ် လို့။ အရွယ် ပြောင်းတော့အရောင် ပြောင်း
လာပြီး အေးချမ်း တဲ့အငွေ့ကို ရ လိုက် သလိုပါပဲ။
ဆီလျော် အောင် ပြန်တယ် ဆိုပေမဲ့ခံစားပြီးမှ ရေးဖွဲ့ထားသလိုပါပဲ။
``ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ် ချစ်ခင်ရသူများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ အကြောင်းကို သိအောင် ပြောပြဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ကြ ဖူးမလား မသိဘူးနော်..``
အခုချိန်မှ ပြောမယ်ဆိုရင်တောင် ပြောဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ..။ ၁၅၀၀ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၅၂၈ ပဲဖြစ်ဖြစ်..... ကိုယ် ချစ်ခင်ရသူများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ အကြောင်း သိအောင် ပြောမပြနိုင် ခဲ့တာကိုက ကျွန်တော့် အပြစ်လို့ ဆိုရမှာလားပဲဗျ... အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်.. အမရေ..
တစ်ကယ်တမ်းကျပြန်တော့လည်း အဲ့ဒီလိုအရာလေးတွေက ဘ၀မှာလိုအပ်သေးတာပဲနော်...။ ဟုတ်ပဗျာ...။
နောက်မကျရအောင်လို့ ငယ်ငယ်ထဲက အလေ့အကျင့်လုပ်ထားပါတယ်း)
တန်ဖိုးများတာ မများတာထက် အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးတွေမှာ သတိတရနဲ့
လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘေးကလူရဲ့ စိတ်နှလုံးသား
အစဉ်အမြဲ နုပျိုနေအောင် လုပ်ပေးမှ အဖော်မွန်ကောင်း ဖြစ်မယ်လေ
ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူရယ် မဟုတ်ပါဘူး. . .
အမှတ်တရ လေးတွေ ဆိုတာကတော့ ရှိသင့် ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုတာကို ဆက်ပြီး နုပျိုစေမှာပါ။
ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာလေးဗျာ ....
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ တချိန်ချိန်တော့ ရောင်ပြန်ဟပ်တတ်တာပဲနော် ...
ကျွန်တော့်တော့ ကိုမြစ်လိုပဲ အလေ့အကျင့်တော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ...
အဲဒါလေးတွေက ခုတော့ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှု တခုပဲဆိုတာ ပြန်လည်တွေးရင်းနဲ့ ကျေနပ်နေရပါပြီ ...
အင်းး အပျိဂျီးးးးးး (ပါးပါးလေသံပေါ့ ဟဟ) ရေးထားတာ ဟက်ထိတယ် ဗျိုးးးးးးး ဟိ
စံတင်လောက်တဲ့ အချစ်လို့ခေါ်ရမလား မသိဘူး။ သိလိုက်တာ တစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူတွေဆီက အမှတ်တရ လက်ဆောင်ကို တမ်းတတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။
April 24, 2010 at 6:16 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ဇတ်လမ်းလေးပဲ အစ်မရေ..အသက်တွေကြီးသည့်တိုင် မပျက်ယွင်းတဲ့ မတ္တာကိုမြင်တွေ့ ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ခင်တဲ့(ချိုကျ)
အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေဟာ..ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပါပဲနော်..။ တချို့က ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထုတ်ဖော်ပြဖို့ သူတို့ရဲ့ ပင်ကို သဘာဝအရ တုန့်နှေးနောက်ကျ နေတတ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ ဘယ်အခါမှ နောက်မကျမိစေဖို့ ဒီပို့စ်လေးက မက်ဆေ့ခ်ျပေးလိုက် သလိုပါဘဲ ချောရေ ။
“ကျွန်မကို လက်ဆောင်မပေးလဲ ရှင့်ကို အမြဲချစ်နေမှာ၊ ဂရုစိုက်နေမှာပါ အဖိုးကြီးရယ်” အကြိုက်ဆုံးပဲ။
အဖိုးကြီးလည်း အဖွားကြီးဆီက လက်ဆောင်လိုချင်မှာပဲ၊
“အချစ်အကြောင်း ပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူးလေ”..
April 24, 2010 at 10:10 PM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် မချောရေ ။အေးအေးလေး နဲ့ငြိမ့် ငြိမ့် လေး ဆွဲဆောင်သွား တာကြည်နူး စရာပါပဲ ။
“အချစ်အကြောင်း ပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူးလေ”....
အင်းးးး ဒါဆိုရင် မျှော်လင့်ချက်လေး ရှိနေပါသေးလား လို့အားတက်သွားတယ် ..
အဖိုးကြီး နဲ့ အဖွားကြီး တို့ လို ကြာလေလေ ခိုင်မြဲ လေလေ အချစ်မျိုး တော့ လိုချင်မိသား ပဲ ..ခုခေတ်မှာတော့ ရှားပါးပစ္စည်း လို ဖြစ်နေပြီနော် ။
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် မချောရေ ။
ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ငြိမ့် ငြိမ့်လေး ဆွဲဆောင်သွား တာ ကြည်နူစရာလေး ပဲ .
ဒါဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ရှိနေသေးလို့အားမလျှော့တော့ဘူး ..း))
အဖိုးကြီး နဲ့ အဖွားကြီးလို ကြာလေလေ ခိုင်မြဲလေလေ အချစ်မျိုး . ခုခေတ်မှာ ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ် ဆိုရမလောက် အောင်ပဲ နော်..
ဒီလို ရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေ လိုချင်မိတယ် .. ဟိဟိ
April 25, 2010 at 1:32 AM
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ..။ အဲလို မေတ္တာဘွဲ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ပီပြင်စွာ ဖွဲသီတတ်တာကို အားကျတယ် တကယ်။
April 25, 2010 at 9:54 AM
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ခံစားရတယ်...
ချစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အချစ်က အမြဲတမ်းနုပျိုနေမှာပါ...
အင်း ..အရေးအသားနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ရတာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ခံစားရတယ်ဗျာ..ကျွန်တော်တောင်အချစ်အကြောင်းရေးချင်စိတ်တွေပေါက်လာပြီ...
April 26, 2010 at 3:57 AM
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့လက်ဆောင်ကို ဘယ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးထားလိုချင်မှာပါ။ တစ်ချို့က ထုတ်ဖော်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပေမယ့် တကယ်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစ်မဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ကြည်နူးမိသွားတယ်။
အင်း....အချစ်အကြောင်းဆိုတာ ပြောပြမှ သိမှာလား... မပြောပဲနဲ့ ခံစားနားလည် မပေးနိုင်ဘူးလား...
ကြည်နူးစရာ ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ... (ကဲကဲ...အခုဇာတ်လမ်းလေးလိုပဲ ကြည်နူးစရာ ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းလေးလဲ ရေးဦးမှပေါ့...လျှိုမထားပါနဲ့...)
မချောရေးတဲ့စာတင် မဟုတ်ဘူး comment တွေအားလုံးကိုပါ ဖတ်သွားပါတယ်။ :)
May 8, 2010 at 2:40 AM
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကိုယ်တွေ့လေးကောဖတ်ချင်ပါတယ် မချောရေ..ဟိးဟိး
May 20, 2010 at 5:12 AM
ဟုတ်တယ်နော် ချစ်သူ က ပေးမယ်ဆိုရင် ကျောက်ခဲလေးတစ်လုံးတောင် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ကိမ်းထားချင်ခဲ့တာပါ် ။ တကယ် မယုံလဲမတတ်နိုင်ဘူးနော်။
May 20, 2010 at 5:26 AM
ချစ်သူက ပေးမရ် ဆိုရင် ကျောက်ခဲလေးတစ်လုံးတောင် အမှတ်တရနဲ့ သိမ်းထားချင်ခဲ့တာပါ တဲ့ ချစ်ကတော့ ပေးချင်ပေး ကျောက်ခဲပေးဘူး သူရ ငါနင့်ကို အနာကပ်ပလာစတာ ပေးမရ် ဟိ ဟိ